HOIC DDos Tool (USER GUIDE) | Shwekoyantaw
Published : 10:39 PM Author : shwekoyantaw
ခုတစ်လော ရိုဟင်ဂါအ ရေးအခင်းကြောင့် cyber war စတင်နေတာလူတိုင်းအသိပါပဲ......။မျိုးချစ်လူငယ် နည်းပညာရှင်များကလဲ သူတို့ တတ်စမ်းသလောက် တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်...ဥပမာ BHG , MHU တို့လို
ပြောချင်တာက တစ်ချို့ လူငယ်တွေကလဲ ဒီ operation မှာပါဝင်လိုကြပေမယ့်.......နည်းပညာ သိပ်မစွမ်း နိုင်တဲ့ ကျွန်တော့်တို့လိုလူငယ်တွေအတွက် တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်နိုင်ရန် DDos Tool လေးတစ်ခု ကို BHG ကအကိုများဖော်ပြပေးထားတာနဲ့ ကျွန်တော်လဲလူတိုင်းသုံးနိုင်ဖို့ မျှဝေပေးလိုက်
Note: [.NET FRAMEWORK 3.5 NEEDED]
ပထမဆုံး Targets ဆိုတာအောက်က (+) ကို ကလစ်ပါ..။
ပြီရင် pop-up box လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်........။အောက်ကလိုပေါ့.....။
URL နေရာမှာ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Target site ကိုထည့်ပါ........။
Power ဆိုတာ request velocity ဖြစ်ပါတယ်...အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်...ဘာသာပြန်ရင်
Low = ~2 requests/sec for eacch THREAD defined on the main GUI
Mediem = ~4 requests/sec for each THREAD defined on the main GUI
High - ~8 requests/sec for each THREAD defined on the main GUI
Booster ဆိုတာconfig scripts တွေဖြစ်ပါတယ်...အောက်ပါအတိုင်းမူရင်းဖော်ပြထားပါတယ်....။
အသုံးပြုသူများဟာ ADD button ကို ကလစ်ပြီးတဲ့အခါအောက်ပါအတိုင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်....။
ပြီးရင် Attacker ဟာ THREADS ကိုပြောင်လဲနိုင်ပါသေးတယ်... PROCESS ကိုစတင်ချင်ပြီဆိုရင်
FIRE TEH LAZER ကိုကလစ်ပြီးစတင်နိုင်ပါပြီး........။
USER GUIDE အပြည့်အစုံကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုချင်ရင် အောက်ပါလင့်တွင်ဖတ်နိုင်ပါသည်........
HERE USER GUIDE
PS: BHG မှညီကိုများကို ဒီ TOOL အတွက် ခရက်တစ်ပေးပါသည်...ကျေးဇူးလဲတင်ပါသည်...။
Labels: DDos, tools, tutorial, website |